ဇဲလျဘုနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲစဉျမတိုငျမီ…လီဗာပူးသတငျးတိုမြား - SPORTS MYANMAR
ဇဲလျဘုနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲစဉျမတိုငျမီ…လီဗာပူးသတငျးတိုမြား
By Edi Tor October 2, 2019
လီဗာပူးဟာ ယနညေ့မှာတော့ ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစု ဒုတိယ‌မွောကျ ပှဲစဉျ အဖွဈ ရကျဘူးဇဲလျဘု အသငျးကို အိမျကှငျးမှာ လကျခံ ယှဉျပွိုငျ သှားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲစဉျသာ အနျဖီးရဲ့ အကွိမျ ၁၀၀ မွောကျ ဥရောပ ပှဲစဉျ ဖွဈလာမှာ ဖွဈပွီး လီဗာပူးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ၉၉ ကွိမျမှာ ပှဲ ၇၀ နိုငျ ၁၂ ပှဲ သရေ ၁၇ ပှဲ ရှုံးနိမျ့ ထားခဲ့ပါတယျ။
လီဗာပူး မနျနဂြော ယာဂနျကလော့က နာဘီကီတာဟာ အင်ျဂလိပျ ဘာသာစကားကို ပိုမို နားလညျ လာပွီ ဖွဈတာကွောငျ့ ဒါဟာ ၎င်းငျးရဲ့ ကစားသမား ဘဝ တိုးတကျစဖေို့ အတှကျ ကွီးမားတဲ့ ‌ခွလှေမျးတဈခု ဖွဈတယျလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ဘိုရပျရှား‌ဒေါမှနျ အသငျးရဲ့ အားကစား ဒါရိုကျတာ ဖွဈသူ မိုကျကယျဇော့က ဂဒြှေနျဆနျခြိုဟာ အနာဂတျမှာ အသငျးကနေ ထှကျခှာ သှားမှာ ဖွဈတယျလို့ ဝနျခံလိုကျပွီး လီ‌ဗာပူး အသငျးဟာ ၎င်းငျးကို စိတျဝငျစားတဲ့ အသငျး‌တှေ ထဲမှာ ပါဝငျ နိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျး သှားခဲ့ပါတယျ။
ယာဂနျကလော့က ဗဈတာမားတို့ဈကို လီဗာပူးရဲ့ development coach အဖွဈ ခနျ့အပျမှာ ဖွဈ‌ကွောငျး အတညျပွု ပွောဆို သှားခဲ့ပွီး အသကျ ၃၁ နှဈအရှယျ မားတို့ဈ အနနေဲ့ အကယျဒမီက ကစားသမား‌‌တှကေို အသငျးကွီး အတှကျ အဆငျသငျ့ ဖွဈအောငျ လုပျပေး ရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ယာဂနျကလော့က ရကျဘူးဇဲလျဘု အသငျးဟာ အနျဖီးမှာ ရလဒျကောငျး အတှကျ အစှမျးကုနျ ကစား သှားမှာ ဖွဈတာ‌ကွောငျ့ လီဗာပူး အသငျးသား‌တှေ အနနေဲ့ တကယျ့ကို ပွငျးပွငျးထနျထနျ ကွိုးစား ကစားမှ ဖွဈမယျလို့ သတိပေး သှားခဲ့ပါတယျ။
ခယျြရိဗယျလာရဲ့ ကိစ်စ နဲ့ ပကျသကျပွီး ယာဂနျကလော့က ‘ကြှနျတျော ကစားသမား အတှကျ စိုးရိမျ မိပါတယျ။ ကြှနျ‌တျော ဒါနဲ့ ပကျသကျပွီး အမြားကွီး မ‌ပွောနိုငျပါဘူး။ ဒီအခြိနျမှာ ဒါနဲ့ ပကျသကျပွီး အခွား သူတှေ အလုပျလုပျနေ ကွပါတယျ။ ကြှနျတျော ပွောနိုငျတာ ကတော့ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ အမှား သကျသကျ ဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ပဲ အပွဈပေး ခံထိုကျပါတယျ။ ဒါသာ ရညျရှယျခကျြနဲ့ လုပျခဲ့တဲ့ အရာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကစားသမားဟာ လုံးဝ ရိုးသားတယျ ဆိုတာပါပဲ။
ပကျဒရိုဟာ စပိနျမှာ တုနျးကလညျး နှဈဝကျလောကျ မကစား ခဲ့ရတဲ့ ပွသနာ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ပွသနာတှေ မ‌ပွလေညျမီ အထိ ကစားခှငျ့ မပေးဘူး ဆိုရငျ ဒါဟာ အကွီးကွယျဆုံး ပွသနာ ဖွဈပါတယျ။ ဘဝမှာ အမှား ကြူးလှနျတာတော့ ရှိပါတယျ။ ဒါဟာ အမှား တဈခုလား ဆိုတာကတော့ ကြှနျတေျာ့ ဘကျက မသခြောပါဘူး။ ဒါဟာ အမှားလို့ ဆုံးဖွတျမယျ ဆိုရငျလညျး ကစားသမား ကို‌တော့ ၁၀၀% အပွဈမပေး သငျ့ပါဘူး။’
ယနဟေ့ာ လီဗာပူးအသငျးရဲ့ ဂိုးသမား အလီဆှနျဘကျကာ ရဲ့ အသကျ ၂၇ နှဈပွညျ့ မှေးနေ့ ဖွဈပါတယျ။ အလီဆှနျဟာ ၎င်းငျးရဲ့ လီဗာပူးကစားသမား ဘဝ ပထမဦးဆုံး ရာသီမှာ လီဗာပူးနဲ့ အတူ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ရယူ နိုငျခဲ့တဲ့ အပွငျ ဥရောပ နဲ့ ဖီဖာရဲ့ အကောငျးဆုံး ဂိုးသမားဆု‌တှေ ရရှိ ထားခဲ့ပါတယျ။ happy birthday Allison!
ဟနျဒါဆနျက အမျကဒှေနျးကို ၂-၀ နဲ့ အနိုငျရရှိ ခဲ့တဲ့ ကာရာဘောငျဖလား တတိယ အဆငျ့ ပှဲစဉျမှာ စီနီယာ ကစားသမားကွီး‌‌တှရေဲ့ ထိနျးကြောငျး ပေးခဲ့ပုံဟာ လူငယျ ကစားသမားလေးတှေ အတှကျ တကယျ့ကို အထောကျအကူ ဖွဈခဲ့ပွီး ဒါဟာ ဒီပှဲရဲ့ ကနြေပျစရာ အကောငျးဆုံး ကဏ်ဍ ဖွဈတယျလို့ ဆိုသှားပါတယျ။
လီဗာပူးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ မလေ နောကျပိုငျး ပထမဦးဆုံး ခနျြပီယံလိဂျ အိမျကှငျး ပှဲစဉျကို ယနညေ့ အနျဖီးမှာ ကစား သှားရမှာ ဖွဈပွီး ယာဂနျကလော့ ကတော့ ရကျဘူးဇဲလျဘုနဲ့ ပှဲမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ဆီမီးဖိုငျနယျ ဒုတိယအကြော့ ဘာစီလိုနာ နဲ့ပှဲက အ‌ငှအေ့သကျမြိုး ပွနျလညျ ဖနျတီး ပေးရနျ ကစားသမားတှနေဲ့ ပရိတျသတျကို တောငျးဆို လိုကျပါတယျ။
ဇဲလျဘုနဲ့ ပကျသကျပွီး ကလော့က ‘ကြှနျတျော သူတို့ ဘယျလောကျ ကောငျးအောငျ လုပျနသေလဲ ဆိုတာကို ၂ နာရီလောကျ ‌ပွောနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရေးကွီးတာက သူတို့ဟာ ကြှနျတျောတို့နဲ့ လုံးဝ မကစားဖူး သေးတာပါပဲ။ သူတို့ ဒီည အိပျယာ ဝငျတဲ့ အခါမှာ ဒါဟာ အနျဖီး ၊ ကြှနျတျောတို့ ကှငျး ဆိုတာကို တှေးနလေိမျ့မယျလို့ ကြှနျတျော မြှျောလငျ့ ထားပါတယျ။’
ဇဲလ်ဘုနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်မတိုင်မီ…လီဗာပူးသတင်းတိုများ
လီဗာပူးဟာ ယနေ့ညမှာတော့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ဒုတိယ‌မြောက် ပွဲစဉ် အဖြစ် ရက်ဘူးဇဲလ်ဘု အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံ ယှဉ်ပြိုင် သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်သာ အန်ဖီးရဲ့ အကြိမ် ၁၀၀ မြောက် ဥရောပ ပွဲစဉ် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး လီဗာပူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၉၉ ကြိမ်မှာ ပွဲ ၇၀ နိုင် ၁၂ ပွဲ သရေ ၁၇ ပွဲ ရှုံးနိမ့် ထားခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူး မန်နေဂျာ ယာဂန်ကလော့က နာဘီကီတာဟာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားကို ပိုမို နားလည် လာပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ဒါဟာ ၎င်းရဲ့ ကစားသမား ဘဝ တိုးတက်စေဖို့ အတွက် ကြီးမားတဲ့ ‌ခြေလှမ်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဘိုရပ်ရှား‌ဒေါမွန် အသင်းရဲ့ အားကစား ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူ မိုက်ကယ်ဇော့က ဂျေဒွန်ဆန်ချိုဟာ အနာဂတ်မှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာ သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဝန်ခံလိုက်ပြီး လီ‌ဗာပူး အသင်းဟာ ၎င်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ အသင်း‌တွေ ထဲမှာ ပါဝင် နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်း သွားခဲ့ပါတယ်။
ယာဂန်ကလော့က ဗစ်တာမားတို့စ်ကို လီဗာပူးရဲ့ development coach အဖြစ် ခန့်အပ်မှာ ဖြစ်‌ကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ပြီး အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် မားတို့စ် အနေနဲ့ အကယ်ဒမီက ကစားသမား‌‌တွေကို အသင်းကြီး အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယာဂန်ကလော့က ရက်ဘူးဇဲလ်ဘု အသင်းဟာ အန်ဖီးမှာ ရလဒ်ကောင်း အတွက် အစွမ်းကုန် ကစား သွားမှာ ဖြစ်တာ‌ကြောင့် လီဗာပူး အသင်းသား‌တွေ အနေနဲ့ တကယ့်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြိုးစား ကစားမှ ဖြစ်မယ်လို့ သတိပေး သွားခဲ့ပါတယ်။
ချယ်ရိဗယ်လာရဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပက်သက်ပြီး ယာဂန်ကလော့က ‘ကျွန်တော် ကစားသမား အတွက် စိုးရိမ် မိပါတယ်။ ကျွန်‌တော် ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး အများကြီး မ‌ပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး အခြား သူတွေ အလုပ်လုပ်နေ ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောနိုင်တာ ကတော့ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အမှား သက်သက် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ပဲ အပြစ်ပေး ခံထိုက်ပါတယ်။ ဒါသာ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကစားသမားဟာ လုံးဝ ရိုးသားတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ပက်ဒရိုဟာ စပိန်မှာ တုန်းကလည်း နှစ်ဝက်လောက် မကစား ခဲ့ရတဲ့ ပြသနာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြသနာတွေ မ‌ပြေလည်မီ အထိ ကစားခွင့် မပေးဘူး ဆိုရင် ဒါဟာ အကြီးကြယ်ဆုံး ပြသနာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာ အမှား ကျူးလွန်တာတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ အမှား တစ်ခုလား ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့် ဘက်က မသေချာပါဘူး။ ဒါဟာ အမှားလို့ ဆုံးဖြတ်မယ် ဆိုရင်လည်း ကစားသမား ကို‌တော့ ၁၀၀% အပြစ်မပေး သင့်ပါဘူး။’
ယနေ့ဟာ လီဗာပူးအသင်းရဲ့ ဂိုးသမား အလီဆွန်ဘက်ကာ ရဲ့ အသက် ၂၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အလီဆွန်ဟာ ၎င်းရဲ့ လီဗာပူးကစားသမား ဘဝ ပထမဦးဆုံး ရာသီမှာ လီဗာပူးနဲ့ အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ရယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် ဥရောပ နဲ့ ဖီဖာရဲ့ အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားဆု‌တွေ ရရှိ ထားခဲ့ပါတယ်။ happy birthday Allison!
ဟန်ဒါဆန်က အမ်ကေဒွန်းကို ၂-၀ နဲ့ အနိုင်ရရှိ ခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင်ဖလား တတိယ အဆင့် ပွဲစဉ်မှာ စီနီယာ ကစားသမားကြီး‌‌တွေရဲ့ ထိန်းကျောင်း ပေးခဲ့ပုံဟာ လူငယ် ကစားသမားလေးတွေ အတွက် တကယ့်ကို အထောက်အကူ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ဒီပွဲရဲ့ ကျေနပ်စရာ အကောင်းဆုံး ကဏ္ဍ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ နောက်ပိုင်း ပထမဦးဆုံး ချန်ပီယံလိဂ် အိမ်ကွင်း ပွဲစဉ်ကို ယနေ့ည အန်ဖီးမှာ ကစား သွားရမှာ ဖြစ်ပြီး ယာဂန်ကလော့ ကတော့ ရက်ဘူးဇဲလ်ဘုနဲ့ ပွဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ဆီမီးဖိုင်နယ် ဒုတိယအကျော့ ဘာစီလိုနာ နဲ့ပွဲက အ‌ငွေ့အသက်မျိုး ပြန်လည် ဖန်တီး ပေးရန် ကစားသမားတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
ဇဲလ်ဘုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကလော့က ‘ကျွန်တော် သူတို့ ဘယ်လောက် ကောင်းအောင် လုပ်နေသလဲ ဆိုတာကို ၂ နာရီလောက် ‌ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတာက သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ လုံးဝ မကစားဖူး သေးတာပါပဲ။ သူတို့ ဒီည အိပ်ယာ ဝင်တဲ့ အခါမှာ ဒါဟာ အန်ဖီး ၊ ကျွန်တော်တို့ ကွင်း ဆိုတာကို တွေးနေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့် ထားပါတယ်။’